..त्यसपछि बेहुलाले बेहुलीलाई मोटरसाइकलमा लिएर फर्के – Classic Khabar
..त्यसपछि बेहुलाले बेहुलीलाई मोटरसाइकलमा लिएर फर्के
June 20, 2021 123
सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-८ का सन्तोष श्रेष्ठले निषेधाज्ञाका बीच बेहुलीलाई आफैले मोटरसाइकलमा चढाएर घरमा भित्र्याएका छन् । धर्मदेवीको आँखीभूईँबाट ती बेहुला-बेहुली मोटरसाइकलमा खाँदबारी फर्किएका हुन् । बेहुला सन्तोषले धर्मदेवी नगरपालिका-७ की चन्द्रिका श्रेष्ठसँग विवाह गरेका हुन् । विवाहमा अन्य कुनै तडकभडक देखिएन । कोभिड-१९ का कारण १५ जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले रोक लगाएको छ ।
यो पनि, शहरभन्दा गाउँमा सङ्क्रमित बढ्दै – कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको शुरुआतमा तनहुँका शहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै थियो । सुरक्षित हुने भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएपछि शहरमा बस्नेहरु गाउँ जान शुरु गरे । गाउँ जान र बाहिरन कुनै रोकतोक थिएन । गाउँमा पूजापाठ, भोजभतेर पनि निर्बाध चलिरहेका थिए । शहरियालाई आतङ्कित बनाएको . अहिले गाउँतिर पसेको छ । कतिपय गाउँमा त भुसको आगो फैलिए झैँ . फैलिएको छ । बरु शहरमा सावधानी अपनाउँदा विस्तारै सङ्क्रमण दर घट्दो देखिन्छ ।
गाउँलेकै लापरवाहीले . फैलिरहेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अजय श्रीवास्तवले बताउनुभयो । “गाउँमा सावधानी नै अपनाइएको छैन । खेतीपाती सँगै गर्छन् । चौतारोमा सँगै बसेर गफिन्छन् । गाउँमा मास्क अनिवार्य पनि छैन, मापदण्डको पालना हुँदैन । एक जना सङ्क्रमितले सयौँलाई फैलाउँछ,” श्रीवास्तवले भन्नुभयो ।
शुक्लागण्डकीमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५८ पुगेको छ । पछिल्ला सातामा परीक्षण भएका स्वाबको पिसीआर रिपोर्टमा पोजेटिभ हुनेको सङ्ख्या गाउँ र शहर क्षेत्रका बराबरी छ । होम आइसोलेसनले पनि सङ्क्रमण फैलिन बढवा दिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्रीवास्तवको विश्लेषण छ । . नियन्त्रणको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै हो भन्ने गलत बुझाई आम सर्वसाधारणमा रहेको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो । “जति दायित्व स्वास्थ्यकर्मीको छ त्यति नै घरपरिवार, नागरिक समाज, टोलको र जनप्रतिनिधिको छ,” उहाँले भन्नुभयो । .लाई नियन्त्रण गर्नलाई सबै पक्ष मिलेर गाउँमा निगरानी बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
भिमादका गाउँ–गाउँमा .सँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिने बिरामी थुप्रै छन् । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा गाउँमा पुगेर सर्वसाधारणको एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भिमादको वडा नं २ को जलौदीमा एकैदिन ७० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २८ जनालाई पोजेटिभ पुष्टिभयो ।
गाउँमा फैलिएको . नियन्त्रणका लागि एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाएकामा बिरामी परेका परीक्षण गर्न नमानेको उहाँले बताउनुभयो । “सङ्क्रमण भएमा सिटामोल खाने, घरायसी औषधि खाएर दुई÷चार दिनमा निको भएका धेरै छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमण भएमा गाउँ समाजले नराम्रो दृष्टिले हेर्न भएकाले पनि परीक्षण गर्न चाहँदैनन् ।”
जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उपचार खोज्ने प्रवृत्तिले सङ्क्रमण र मृत्युदरमा वृद्धि भएको छ । तनहुँमा हाल ९१४ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । दोस्रो लहरको . फैलिएपछि जिल्लामा १७ हजार ३७८ जनाको पिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट . परीक्षण गरिएकामा चार हजार २४३ लाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएके छ । तीमध्ये ९९ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन हजार २३० जनाले .लाई जित्न सफल भएका छन् । सबैभन्दा धेरै शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सङ्क्रमित छन् । देवघाट गाउँपालिकामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्यतर्फ ओरालो झर्दै छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शुक्लागण्डकीमा उच्च देखिन्छ ।
Prevआज असार ६ गतेका मुख्य समाचार-सवारीमा जोर बिजोर, भारी बर्षा, रेखाको आक्रोश, रमेश प्रसाईको लालमोहर आउदै
Nextआंचल शर्मा भन्छिन्, ‘रियल हिरो पल शाह नै हो, उँहालाइ महानायक राजेश हमालसंग तुलना गर्न मिल्दैन’ (भिडियो)